Hadii aan 15-daqiiqo sii Joogi Lahaa Hoteelka waa lay Dili lahaa, Waxkasta waan la socday”Daawo Madaxweyne Erdogan | Berberatoday.com
Hadii aan 15-daqiiqo sii Joogi Lahaa Hoteelka waa lay Dili lahaa, Waxkasta waan la socday”Daawo Madaxweyne Erdogan
Erdogan ayaa yiri “Dadka waxa ay dalbanayaan in dib loo soo celiyo ciqaabta daldalida. waxa ay aaminsan yihiin in dadka afganbiga sameeyay ay yihiin argagixiso, maxaan sanado fara badan ugu quudinaynaa xabsiga”. sidoo kale erdogan ayaa sheegay in ay samayn doonaan codsiga ah in dib loogu soo celiyo Fetullah Gulen oo ah ninka looga shakisan yahay in uu ka dambeeyay Afganbiga”.
“Hadii aan 15-daqiiqo sii Joogi Lahaa Hoteelka waa lay Dili lahaa, Waxkasta waan la socday, in ay la wareegeen Airporka Ataturk waa ogaa, waxaan wacay maamulaha ciidama Istanbul waxaan u sheegay in ay ka saaraan afganbiyaasha airporka, waxaan ku amray in ay ka nadiifiyaan argigixisada airporka.
Maadaama aan hawada joognay khadka ayaa naga istaagayay, Pilotka ayaan weydiiyay inta aan hawada ku jiri karno, 3-4 saac in aan ku jiri karno ayuu ii sheegay. F-16 ayaa agteena wareegaysay”.